မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်များအားတစ်ခါတစ်ရံတွင် "process agent သို့မဟုတ်" statutory agent "ဟုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင်၏စစ်ဆင်ရေးကိုစတင်ခြင်းနှင့်ရေရှည်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းသင့်ပြည်နယ်နှင့်အပြည့်အဝလိုက်နာမှုကိုသေချာစေသည်။ သင့်ကိုယ်စားအစိုးရအေဂျင်စီများနှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုကိုင်တွယ်ရန်သူတို့အလုပ်ချိန်အတွင်း၎င်းတို့ကိုရနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတရားစွဲဆိုလျှင်သင်၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာသည်ဖောက်သည်များ၊ ၀ န်ထမ်းများ၏ရှေ့မှောက်၌ရုံးအစား
မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုထိခိုက်နိုင်သည်။ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ပြည်နယ်သည်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ် ၀ န်ဆောင်မှုများသက်တမ်းကုန်ဆုံးခွင့်ပြုသည့်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။
Inသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်အချို့ပြည်နယ်များ။ သို့သော်ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဤတာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ လူအများစုရှောင်ကြဉ်လိုသည့်အများပြည်သူအတွက်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလည်းဖွင့်ပေးသည်။
ဒါကြောင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်ဝန်ဆောင်မှုသည်အလွန်ရေပန်းစားသည်။ သင်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုကိုစတင်သည်ဖြစ်စေ၊ သင်၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်ကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ၊ ဤလမ်းညွှန်သည်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်အကောင်းဆုံးမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်ဝန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေရန်ကူညီလိမ့်မည်။
Top6Registered Agent Services
# 1 - အနောက်မြောက် Registered Agent - ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံး
မြောက်အနောက်မြောက် RA ကိုသွားပါ။
$ 125 မှ
နာမည်တွင် "မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်" နှင့်အတူ ကိုမြင်ရခြင်းသည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ > Northwest Registered Agent ငါတို့စာရင်းထဲမှာထိပ်ဆုံးရောက်နေတယ်။
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုကုမ္ပဏီလမ်းညွှန်များနှင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအစမှထိန်းသိမ်းရန်ဤပံ့ပိုးသူ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဒုတိယနေရာတွင်ရှိသည်။ LLCs နှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက် Northwest မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်သည်စဉ်းစားရန်ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။
အခမဲ့မေးလ်ပို့ခြင်း။ ဤအရောင်းကျွမ်းကျင်သူများကသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမှတ်ပုံတင်ထားသည့်ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ၏ပုံမှန်လက်လှမ်းမမီနိုင်သည့်အထောက်အပံ့ဖြင့်သင်၏စီးပွားရေးကိုစတင်ထိန်းသိမ်းရန်ကူညီလိမ့်မည်။
၀ န်ဆောင်မှုသည်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၁၂၅ ဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်ငါးခုနှင့်အထက်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး လိုအပ်ပါကနှုန်းသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀ သို့ကျသွားလိမ့်မည်။ အကောင်းဆုံးအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ထားသည့်အေးဂျင့်များ
href=> တစ်နှစ်အခမဲ့> မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်
ဒေါ်လာ ၁၁၉ ဖြင့်သက်တမ်းတိုးခြင်း အလိုအလျောက်စာပို့ခြင်း
အီးမေးလ်နှင့် SMS သတိပေးချက်များ
အခမဲ့စတင်ပါ။ Incfile ဟာကမ်းလှမ်းမှုများစွာရှိတဲ့စီးပွားရေးဖန်တီးမှုဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုလွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်အတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါင်း ၅၀၀,၀၀၀ ကျော်ကအသုံးပြုခဲ့သည်။ Incfile အလွန်ရေပန်းစားသောအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာသင်သည်သူတို့ကိုမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး အခမဲ့ရယူရန်ဖြစ်သည်။
မှန်တယ်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ LLC သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ရန် Incfile ကိုအသုံးပြုပါက၊ သင်သည်ပထမနှစ်တွင်အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်တစ်ခုရရှိမည်။ ပြည်နယ်အခကြေးငွေများကိုသာသင်ပေးရမည်။ Platinum အစီအစဉ်များကိုဒေါ်လာ ၁၄၉ နှင့် ၂၉၉ အသီးသီးဖြင့်စတင်သည်။ သို့သော်သုံး ဦး စလုံးသည်အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်နှင့်အတူလာသည်။ Incfile ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်ဝန်ဆောင်မှု၏ထူးခြားချက်များနှင့်အားသာချက်များကိုဒီမှာကြည့်ပါ။
href=> IRS မေးလ်စာပေးစာယူနှင့်သင့်ကိုယ်စားတရားစွဲဆိုမှုများရရှိနိုင်ပါသည်။
စာရွက်စာတမ်းများကိုလက်ခံရရှိတဲ့အခါအီးမေးလ်နဲ့ SMS သတိပေးချက်များ
ရိုးရှင်း။ အလိုလိုသိသောအွန်လိုင်း dashboard အလိုအလျောက်စာပို့ခြင်း အွန်လိုင်း dashboard Incfile လိုင်းသည်ယနေ့ခေတ်စျေးကွက်နှင့်လုံး ၀ ကွာခြားမှုရှိသည်။ မေးလ်ပို့ခြင်းနှင့်သတိပေးခြင်းများအကြားတွင်ဤသည်အလွန်ထူးခြားကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။
Incfile ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်စံနှုန်းမှာဒေါ်လာ ၁၁၉ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်စီးပွားရေးအစီအစဉ်များမှတစ်ခုကိုစာရင်းသွင်းလျှင်ပထမဆုံးအခမဲ့နှစ်ပြီးနောက်သင်၏အစီအစဉ်သည်သက်တမ်းတိုးလိမ့်မည်။
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိသူများအတွက်မူ Agile ပြောင်းလဲမှုအတွက်အခကြေးငွေမှာ Infile $ ၄၉ မှစတင်ပြီးပေါင်းသည်။ ပြည်နယ်အခကြေးငွေများ။
စီးပွားရေးစတင်ရန်ဂရုစိုက်ပြီးအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်ကို Incfile မှတဆင့်ရယူပါ။
#3- Swyft Filings - Agen serviceစွယ်စုံသုံးပြီးအများဆုံးမှတ်ပုံတင်သော ts
Swyft Filings သို့သွားရန် $ 149 မှမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်များ
ရိုးရှင်းသော inion အွန်လိုင်းစာရွက်စာတမ်းများသို့ဝင်ရောက်ခြင်း
မှတ်ပုံတင်ထားသည့်အေးဂျင့်၌အခြားသောလူသိများပြီးယုံကြည်ရသောနာမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့က LLCs, C-Corps, S-Corps နှင့်အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
ထို့ကြောင့်မည်သည့်စီးပွားရေးအမျိုးအစား၊ စီးပွားရေး၊ အရွယ်အစား၊ လုပ်ငန်းမခွဲခြားဘဲလုပ်ဆောင်မှုများသည်အလွန်ကောင်းမွန်လိမ့်မည်။ စဉ်းစားရန် option ကို။ Swyft Filings သည်ပြည်နယ် ၅၀ လုံးတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်ဝန်ဆောင်မှုများရှိသည်။
စတင်ရန်လွယ်ကူသည်။ မှတ်ပုံတင်ရန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အွန်လိုင်းမေးခွန်းလွှာကိုဖြည့်ပါ။ သင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့် Swyft Filings သည်လိုက်နာမှုရှိရန်သေချာစေရန်သင့်အားအချိန်မီသတိပေးမှုများပေးပို့သောအလိုအလျောက်နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ ဝန်ဆောင်မှု$ 149 မှစတင်ကာအလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးသည်။ သင့်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ကိုစိုးရိမ်ရန်မလိုတော့ပါ။
Swyft Filings ကသင့်ကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ သင်၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်ကအွန်လိုင်းမှတင်ထားသောတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများကိုလွယ်ကူစွာကြည့်ရှုပါ။ ဤဝန်ဆောင်မှုသည်လုံခြုံစိတ်ချရပြီးသင်၏ privacy ကိုကာကွယ်ပေးသည်။
Swyft Filings သည်သင်ရွေးချယ်ရန်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ရန်အစီအစဉ်များကိုလည်းကမ်းလှမ်းသည်ကိုလည်းသတိပြုသင့်သည်။ ဒီအစီအစဉ်များကိုဒေါ်လာ ၄၉ ဒေါ်လာနဲ့ပြည်နယ်အခကြေးငွေများမှစတင်ပါ။
ဒီနေ့ Swyft Filings ဖြင့်စတင်ပါ။
#4- ZenBusiness - LLCs အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်အကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်ဝန်ဆောင်မှုများ။
ပါ ၀ င်သည့်သင်တန်းအစီအစဉ်များ
သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖန်တီးမှုနယ်ပယ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်နာမည်အကြီးဆုံးနာမည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည်သူတို့၏ LLC ဖွဲ့စည်းမှု ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်လူသိအများဆုံးဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလည်းပေးသည်။
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ LLC ကိုစတင်ရန် ZenBusiness ကိုအသုံးပြုနေပါက၎င်းတို့ဘက်မှမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်ရရှိရန်သဘာဝကျသည်။ ထို့အပြင်
ဒီမှတ်ပုံတင်ထားသည့်အေးဂျင့်ဝန်ဆောင်မှုများသည်သင်၏လိုက်နာမှုကိုသေချာစေလိမ့်မည် LLC ။ ၎င်းသည်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်ကာကွယ်မှုအလွှာတစ်ခုကိုထပ်ထည့်ထားသည်။ ZenBusiness သည်သင်၏အရာအားလုံးပေါ်ရှိအရေးကြီးသောတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းအားလုံးကိုလက်ခံလိမ့်မည်၊ သင်ကသင့်အားကြည့်ရှုရန်၊ ပုံနှိပ်ရန်သို့မဟုတ်၎င်းကိုအချိန်မရွေးဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်စနစ်တကျရှိသော online dashboard သို့တင်လိမ့်မည်။ မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်များ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၉၉ မှစတင်သည်။
သို့သော်သင် ZenBusiness ကိုအသုံးပြုနေလျှင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းတို့၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အစီအစဉ်တိုင်းတွင်ပါဝင်သည်။ ဤအစီအစဉ်များသည်ဒေါ်လာ ၁၂၉ မှစတင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအတူတကွပေါင်းစည်းရန်သဘာဝကျသည်။ အကယ်၍ သင်သည် LLC တစ်ခုကိုစတင်ပြီးမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်လိုအပ်သည်ဆိုလျှင်၊
ထက် ပို၍ မကြည့်ပါနှင့်။
#5- MyCorporation - အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး။
$ 120 မှစတင်သည်။
အခမဲ့ EIN ငွေသွင်းခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်း။ RA အချို့လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များတွင်ပါဝင်သည်။ သက်တမ်းတိုးရန်အလိုအလျောက်
နှစ်ပေါင်း 20 ကျော်လောက်နီးပါးရှိခဲ့သည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှစတင်၍ သူတို့သည်ပြည်နယ် ၅၀ ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်သန်းကျော်ကိုဖန်တီးရန်ကူညီခဲ့ကြသည်။
ဤလုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်ရှေ့ဆောင်နှင့်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေဖြင့် MyCorporation ၏မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်အသေးစားလုပ်ငန်းငယ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
စတင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားပြီးပုံစံကိုဖြည့်ပါမျဉ်းကြောင်း။ MyCorporation သည် LLCs နှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်ဖြစ်သည့်အခါသင့်လုပ်ငန်းအတွက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံရရှိပါ။ MyCorporation မှ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဒေါ်လာ ၁၂၀ မှစတင်သည်။ နှုန်းနှစ်စဉ်အလိုအလျှောက်သက်တမ်းတိုး။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးသတိပေးချက်များနှင့်ကိရိယာများပါ ၀ င်သည့်သင်၏အစီအစဉ်သို့ MyIncGuard ကိုလည်းသင်ထည့်နိုင်သည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုစတင်ရန်အတွက် Deluxe နှင့် Premium packages များနှင့်အတူပုံမှန်အတိုင်းမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ ဤရွေ့ကားအသီးသီး $ 224 နှင့် $ 324 မှာစတင်။ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစတင်ရန် MyCorporation ကိုအသုံးပြုပါက
သင်သည် EIN အပ်ငွေရရှိလိမ့်မည်အခမဲ့
#6- MyCompanyWorks - မှတ်ပုံတင်ထားသည့်အေးဂျင့်များပြောင်းလဲခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံး။
href=> > 100% ကျေနပ်မှုအာမခံ
စတင်ခြင်း MyCompanyWorks စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖန်တီးမှုနယ်ပယ်၌အခြားလူကြိုက်များတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် LLCs, c-corps နှင့် s-corps များအတွက်လေ့ကျင့်ရေးနှင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှစ၍ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိကုမ္ပဏီပေါင်း ၆၀,၀၀၀ ကျော်သည် MyCompanyWorks ကိုသူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချခဲ့သည်။
MyCompanyWorks သည်ပြည်နယ် ၅၀ လုံးတွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ MyCompanyWorks ကိုကြိုက်တယ်၊ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တစ်ခုစတင်ရန်မည်သူမဆိုအတွက်သာမကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်ကိုပြောင်းလဲလိုသောစီးပွားရေးပိုင်ရှင်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ယခုရှိနေသည်။ ဤပံ့ပိုးသူထံမှမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာ တရားဝင်လိုက်နာမှုရှိစေရန်သေချာစေပါ။ သင့်ကိုယ်စားစာပို့ခြင်း ရိုးရှင်းတဲ့အွန်လိုင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ပုံစံများနှင့်စသည်တို့ကိုပေးပို့ခြင်းအတွက်ချက်ချင်းအကြောင်းကြားစာများအပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်နှင့်စီးပွားရေးအချက်အလက်များအကြားသီးခြားလွတ်လပ်မှုအလွှာ မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်ဝန်ဆောင်မှုသည် $ မှစပြီး တစ်နှစ်လျှင် 99. အကယ်၍ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်စတင်ပြီးဖြစ်ပါကသင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်ကိုပြောင်းလဲရန်သင်ကြိုးစားနေပါက MyCompanyWorks ကမလုပ်ပါ။ မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဒေါ်လာ ၂၇၉ မှစတင်၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ရန်အထုပ်အပိုးများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုသော်သင်သည် ၀ န်ဆောင်မှုကိုဒေါ်လာ ၇၉ မှစတင်သောအခြားလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တစ်ခုသို့ထည့်နိုင်သည်။ MyCompanyWorks အစီအစဉ်များကိုရက်ပေါင်း ၉၀ ငွေပြန်အမ်းသောအာမခံ ။ ဘယ်လိုရှာရမလဲသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးမှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ လူကြိုက်များသောယုံကြည်ချက်နှင့်ဆန့်ကျင်သည်၊ မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့် ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးအတူတူမဟုတ်ပါ။ ဤရွေးချယ်မှုများထဲမှအချို့သည်အခြားသူများထက် ပို၍ ကောင်းမွန်သည်။ ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသောကြောင့်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်အကဲဖြတ်သောအခါသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များရှိပါသည်။ အောက်ပါအချက်များကိုမင်းသွားနေစဉ်တွင်မှတ်သားထားခြင်းကသင်၏ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ Business Entity အမျိုးအစား ဘယ်စီးပွားရေးအမျိုးအစားကိုသင်စတင်နေပြီလဲ။ သို့မဟုတ်လက်ရှိအဖွဲ့အစည်းတွင်မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစားရှိသနည်း။ မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်အများစုသည်အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြလိမ့်မည်၊ သို့သော်အချို့သည်အခြားတစ်ခုထက်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအသင့်အတင့်သာရှိသည်။ LLC များသည် S-Corp ကဲ့သို့မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ် ၀ န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ မရပါ။ မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်အချို့သည်အဖွဲ့အစည်းများ ၀ ယ်ရန်ပိုကောင်းသည်t အကျိုးအမြတ်မဟုတ်သည်။ သင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်များနှင့်သင်အလုပ်လုပ်ရန်စီစဉ်ထားသောမည်သည့်အရာအမျိုးအစားများကိုကြည့်ရန်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာတူးပါ။ အကယ်၍ သူတို့သည်သင့်ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများနှင့်အလုပ်လုပ်နေပါက၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။ လိုက်နာကျင့်ကြံခြင်း အကောင်းဆုံးမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ် ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင့်အားအမျိုးသားဥပဒေများနှင့်ဖက်ဒရယ်တို့ကိုလိုက်နာမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီလိမ့်မည်။ သင့်အားသတ်မှတ်ရက်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုသင်မပျက်မကွက်သေချာစေရန်သင့်အား SMS သို့မဟုတ်အီးမေးလ်သတိပေးချက်များပေးပို့မည့်ဝန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေပါ။ အချို့ဝန်ဆောင်မှုများသည်အပိုဆောင်းပစ္စည်းများနှင့်လိုက်နာရန်လမ်းညွှန်ချက်များမှလာသည်။ မှတ်ပုံတင်ထားသည့်အေးဂျင့် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ရှင်းလင်းသောနိမ့်ဆုံးကိုသာလုပ်ဆောင်ရန်နှင့်အပိုမိုင်အကွာသို့သွားသူများအကြားခြားနားချက်ကိုပြောပြရန်လွယ်ကူသည်။ သီးသန့်လုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေး သီးသန့်တည်ရှိမှုသည်အဓိကအားသာချက်များဖြစ်သည်။ မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ် မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်၏လိပ်စာကိုသင်၏အိမ်သို့မဟုတ်ရုံးလိပ်စာမဟုတ်ဘဲအများသုံးမှတ်တမ်းအဖြစ်ဖော်ပြလိမ့်မည်။ စာရွက်စာတမ်းများသင်၏မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်မှတစ်ဆင့်တရားဝင်နှင့်အစိုးရစာပေးစာယူကိုလွယ်ကူစွာသွားနိုင်သည်။ တချို့ကမေးလ်သိုလှောင်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲစာပို့ခြင်းကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မယ်။ အခြားသူများကသင်ကအဝေးမှကြည့်ရှုနိုင်သည့်အွန်လိုင်း dashboard သို့စာရွက်စာတမ်းများကိုလုံလုံခြုံခြုံ upload လုပ်လိမ့်မည်။ Business Development Services မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်ဝန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေနေသူအများစုသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ကိုစတင်နေကြသည်။ နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကိုသာအသုံးပြုခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ အမှန်မှာ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်သော ၀ န်ဆောင်မှုများစွာသည်သင့်ကို၎င်းတို့ကိုမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အသုံးချလိမ့်မည်။ အချို့ကသင်က start-up အစီအစဉ်အတွက် sign up လုပ်တဲ့အခါမှာအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးလိမ့်မည်။ သင်၌ရှိပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိပြီးသားနှင့်သင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်ကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်လျှင်၊ အရေးမကြီးဘူး Value မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏စျေးနှုန်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ခန့်ကျသည်။ သင် $ 50 ထက်ပိုသောသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းအတွက်အချို့ကိုရှာနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ပြောရရင်မင်းကအများကြီးပိုမပေးသင့်ဘူး။ အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်သူတို့၏ရှေ့နေကိုမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော်ဤလမ်းညွှန်တွင်သုံးသပ်ထားသောဝန်ဆောင်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကုန်ကျနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏မှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ရန်အစီအစဉ် (အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း) နှင့်ပေါင်းစည်းလိုက်လျှင်၎င်းသည်များသောအားဖြင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်အချိုး။ Support သင်မေးခွန်းများရှိပါကသို့မဟုတ်အကူအညီလိုအပ်ပါကသင့်အားမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်ကသင့်ကိုကူညီရန်ရှိပါတယ်။ ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ အွန်လိုင်းပေါ်တယ်မှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်မှတ်ပုံတင်ထားသော ၀ န်ဆောင်မှုအကဲဖြတ်အေးဂျင့်၏အရေးကြီးပြီးမကြာခဏသတိမထားမိသောအရာဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်ဖောက်သည်ရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ အများစုမှာသုံးသပ်ရေးဖော်ပြထားသည်အကူအညီ (ကောင်းလားဆိုးသည်ဖြစ်စေ) နှင့်တစ်ခုခုလုပ်လိမ့်မည် နိဂုံးချုပ် အကောင်းဆုံးမှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ၎င်းသည်သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ မြောက်ကိုရီးယားမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အထက်သို့ ကျော်လွန်၍ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ Inclile သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်သင်လက်မှတ်ထိုးသောအခါအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ Swyft Filings သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအားလုံးကိုနေရာချရန်စီစဉ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် LLC တစ်ခုဖွဲ့စည်းလျှင်၊ ZenBusiness မှမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစစ်ဆေးပါ။ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် MyCorporation ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့ပြောင်းလဲသင့်သည်။ သင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်များပြောင်းရန်ရှာဖွေသူများအတွက် MyCompanyWorks သည် switch agent အခကြေးငွေမယူပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေသင်၏စီးပွားရေးအမျိုးအစားသို့မဟုတ် bထိုသို့ဖြစ်ပါကဤလမ်းညွှန်မှအကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်အကောင်းဆုံးမှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်ဝန်ဆောင်မှုကိုရှာနိုင်သည်။
၀ န်ထမ်းများလေ့ကျင့်သင်ကြားရန်အတွက် Beginner လမ်းညွှန်
2021-06-22 22:50:58 | ဝဘ်ဆိုက်...
၀ န်ထမ်းများကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းသည်ဗဟုသုတနှင့်အရည်အချင်းပြည့်ဝမှုကွာဟချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်၊ စီးပွားရေးနယ်ပယ်နှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်နှင့်အလုပ်အကိုင်နှင့်ကျေနပ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သို့သော်အလုပ်များသော ၀ န်ထမ်းများ၏အချိန်ဇယား၊ ကွဲပြားသောလုပ်သ...
အကောင်းဆုံး LLC န်ဆောင်မှုများ
2021-06-22 22:43:23 | ဝဘ်ဆိုက်...
လုပ်ငန်းရှင်များစွာသည်သူတို့နှင့်သူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတာဝန်ယူမှုရှုထောင့်မှခွဲထုတ်ရန်အတွက် LLC တည်ထောင်ရန်ရွေးချယ်သည်။ အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသည့်ကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ရှင်များသည်စီးပွားရေးကြွေးမြီများနှင့်တရားစွဲဆိုမှုများအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတာဝန်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ LLC တည်ထောင်ရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။...
2021-06-22 22:36:16 | ဝဘ်ဆိုက်...
အောင်မြင်သောဆင်းသက်နိုင်သည့်စာမျက်နှာ၏အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုမှာပစ်မှတ်ထားသောဖောက်သည်ဖြစ်သည်။ တကယ်လို့သင့်တော်တဲ့လူတွေကိုသင့်ရဲ့စာမျက်နှာများကိုပထမဆုံးသွားခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်၊ သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုအားလုံးဟာဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကဲ့သို့ပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ (တရားဝင်! ) မရနိုင်သောကြောင့်လူတို့၏စိတ်က...
2021-06-22 22:28:42 | ဝဘ်ဆိုက်...
၀ န်ထမ်းများလွှဲပြောင်းခြင်းအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ရာတွင်လူများ၏အကြီးမားဆုံးပြproblemနာမှာရေရှည်အောင်မြင်မှုရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ လွှဲပြောင်းမှုအစီအစဉ်များသည်များသောအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာများစွာနှင့်စတင်လေ့ရှိသော်လည်းတိုတောင်းသောကာလတွင်၎င်းတို့ကိုအောင်မြင်စွာထိန်းသိမ်းထားခြင်းသည်ခက်ခဲလေ့ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့...
၀ င်ငွေကာလအတွက်စတင်သူတစ် ဦး ၏လမ်းညွှန်
2021-06-21 00:03:50 | ဝဘ်ဆိုက်...
အပတ်စဉ်၊ နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်လစာသို့မဟုတ်သုံးခုပေါင်းစပ်ခြင်းသည်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်အကောင်းဆုံးလစာကာလဖြစ်မည်ကိုသင်မည်သို့ဆုံးဖြတ်မည်နည်း ၀ န်ထမ်း ဦး စားပေးမှုများနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေများကဲ့သို့သောအချက်များမှာသိသာထင်ရှားသည့်အချက်များဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်သည်ထိပ်တန်းအဆိုတော်များကိုဆွဲဆောင်ထိန်း...
2021-06-21 00:01:28 | ဝဘ်ဆိုက်...
ဝေးလံခေါင်ဖျားသောအလုပ်များသည်တစ်ချိန်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဖြစ်ခဲမှုဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်မကြာသေးမီကသမိုင်းတွင်သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်။ စတန်းဖို့ဒ်စီးပွားရေးပညာရှင်နီကိုလပ်စ်ဘလွန်းရဲ့လေ့လာမှုကပြသခြင်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလုပ်သားအင်အား၏ ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ဇွန်လတွင်အိမ်မှအချိန်...
2021-06-20 08:35:09 | ဝဘ်ဆိုက်...
Landing page တစ်ခု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ visitors ည့်သည်များကိုထုတ်ကုန်တစ်ခုဝယ်ရန်၊ အီးမေးလ်စာရင်းတွင်ပါ ၀ င်ရန်၊ အခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးရန်စသည်တို့ကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်မည်သည့်ရည်မှန်းချက်ကဲ့သို့မမျှော်လင့်ဘဲမျှော်လင့်စရာမလိုပါ။ "အဲဒါအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့။ visitors ည့်သည်များကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ရန် ဦး ...
2021-06-19 20:19:39 | ဝဘ်ဆိုက်...
လုပ်ငန်းအရွယ်အစားမည်သို့ပင်ရှိပါစေ ၀ န်ထမ်းများအားပျော်ရွှင်စေရန်၊ သစ္စာစောင့်သိရန်နှင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုမှာကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးများပါ ၀ င်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့၏အကျိုးကျေးဇူးများ (သို့) အကျိုးခံစားခွင့်မှတ်တမ်းများသည်မတိကျလျှင်နှစ်ဖက်စလုံးအတွက်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်သည်။...
၀ န်ထမ်းအပိုဆုအစီအစဉ်များအတွက်စတင်သူတစ် ဦး ၏လမ်းညွှန်
2021-06-19 20:13:50 | ဝဘ်ဆိုက်...
၀ န်ထမ်းဆုကြေးငွေအစီအစဉ်သည်သင်၏ ၀ န်ထမ်းများအားစီးပွားရေးရည်မှန်းချက်အသစ်များရရှိရန်အတွက်သူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်ရန်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းရန်လှုံ့ဆော်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သို့သော်မျှတပြီးလှုံ့ဆော်မှုရှိသော ၀ န်ထမ်းဆုကြေးငွေအစီအစဉ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ၀ န်ထမ်းအားလု...
အကောင်းဆုံးချိတ်ဆက်ထားသော link link masking plugins (အရောင်းမြှင့်တင်ရန်အတွက်အချက် (၃) ခု)
2021-06-19 14:50:30 | ဝဘ်ဆိုက်...
သင်၏ WordPress ဆိုဒ်အတွက်အကောင်းဆုံးချိတ်ဆက်ချိတ်ဆက်မှုချိတ်ဆက်ရန်ချိတ်ဆက်ထားသောပလပ်အင်များကိုရှာဖွေခြင်း၊ သို့သော်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာခြင်း Affiliate marketing သည် passive ၀ င်ငွေကိုဖန်တီးရန်အမြတ်အစွန်းအများဆုံးနည်းလမ်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သော်လည်းသင်၏ site ၏ဆက်စပ်ချိတ်ဆက်မ...
2021 ခုနှစ်တွင် 34 အကောင်းဆုံး wordpress ဖြစ်ရပ် themes များ
2021-06-19 05:38:24 | ဝဘ်ဆိုက်...
မင်းရဲ့စပီကာတွေကိုသင်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားပြီ။ တည်နေရာတစ်ခုကိုသင်သော့ခတ်လိုက်သည်။ သင်အတွက် list ည့်သည်စာရင်းကိုပြုစုပြီးသင်၏ဖိတ်ကြားချက်များကိုပေးပို့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။ ယခုသင်လုပ်ရမှာကသင်၏နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အပျက်ကိုလူသိရှင်ကြားကြေငြာလိုက်ပြီ။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုတည်းနှင့်မတူဘဲမည်သို့ပြုလုပ်ရန်ပိုမိုကေ...
အကောင်းဆုံး WordPress WordPress plugins 8
2021-06-19 05:28:21 | ဝဘ်ဆိုက်...
Pinterest တွင်လစဉ်တက်ကြွစွာအသုံးပြုသူသန်း ၅၀၀ နီးပါးရှိပြီး၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးလူမှုမီဒီယာဆိုဒ်များနှင့်သင်၏ WordPress ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့အရည်အချင်းပြည့်မီသောလမ်းကြောင်းကိုပို့ဆောင်ရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေခြင်း။ ဘလော့ဂ်ပို့စ်များ၊ ပုံများနှင့်ဂရပ်ဖစ်များကို Pinterest မျှဝေရန်ခလုတ်နှ...
ဝင်ငွေတိုးမြှင့်ဖို့အကောင်းဆုံး convertify shopify ဖြည့်စွက် themes များစတိုးဆိုင်
2021-06-18 13:41:58 | ဝဘ်ဆိုက်...
မည်သည့်မိုက်ခရိုနယ်ပယ်ကိုမဆိုရည်စူးထားသည့် ၀ င်ငွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုးမြှင့်စေရန်အတွက်အကောင်းဆုံး Shopify ပြောင်းလဲခြင်းဖြည့်စွက်မှုများသည်အဓိကအကြောင်းအရာများသည် ၀ က်ဘ်ပေါ်၌ရောက်ရှိသောအခါ ပို၍ မှတ်မိလွယ်။ ထိရောက်မှုရှိစေသည်။ ဂူဂဲလ်ရှာဖွေမှုသည်ခေတ်မီဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်မှန်ကန်...
သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထိတွေ့မှုပေးရန်အကောင်းဆုံး wordpress themes များ
2021-06-18 13:37:09 | ဝဘ်ဆိုက်...
သင်၏အိုင်တီလုပ်ငန်းတွင်ဖောက်သည် ၀ င်းဒိုးတစ်ခုဖန်တီးရန်စဉ်းစားနေပါသလား။ နောက်ပြီးသင့်ရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကသင့်ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးနေတာသေချာအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ လှုံ့ဆော်မှုလိုအပ်ပါသလား အောက်ဖော်ပြပါကွန်ပျူတာ WordPress themes များစုဆောင်းခြင်းကိုသေချာစွာ scroll လုပ်၍ သင့်အတွက်တစ်ခုခုရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ ချော...
19 အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်း - အဆင်သင့်အနုပညာရှင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တင်းပလိတ်များ
2021-06-18 13:30:53 | ဝဘ်ဆိုက်...
သင်ကဲ့သို့သောဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်စေမည့်အကောင်းဆုံးအနုပညာရှင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုအား အသုံးပြု၍ မေးရိုးကျဆင်းသွားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖန်တီးရန်ကူညီရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ပျောက်ဆုံးနေသည်သင်၏အရူးများနှင့်ထူးချွန်သောအလုပ်များကိုပြပြီးဆွဲဆောင်မှု...